अब चौथो संस्करणको कतारी मुद्रा नचल्ने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — आउँदो असार १७ पछि चौथो संस्करणको कतारी मुद्रा नचल्ने भएको छ । कतारको केन्द्रीय बैंकले १ जुलाई २०२१ (१७ असार २०७८) देखि ती मुद्रा चलनचल्तीबाट हटाउन लागेकाले नेपालमा पनि नचल्ने भएका हुन् ।
यसकारण उक्त मितिअघि नै आफूसँग भएको चौथो चरणको कतारी रियाल सटही गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सूचना जारी गरेर यही वैशाख २७ भित्र आफूसँग भएका कतारी मुद्रा (रियाल) सटही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
स्रोतका अनुसार हाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा र विदेशी बैंकमा गरी करिब २ करोड ६७ लाख कतारी रियाल छ । मंगलबारको विनिमय दरअनुसार यो करिब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर हो । यो तथ्यांकमा मनी चेन्जर कम्पनी, राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालय, रेमिट्यान्स कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल, एयरलाइन्स कम्पनी र सर्वसाधारणसँग रहेको रियाल समावेश छैन । ती निकायसँग रहेको पैसा संकलन भएपछि वास्तविक तथ्यांक पत्ता लाग्ने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘आफूसँग भएका चौथो संस्करणका कतारी रियाल यही वैशाख २७ भित्र राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनी चेन्जर कम्पनीबाट सटही गर्न यो सूचना जारी गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त मितिपछि त्यस्ता नोट सटही गर्न राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनी चेन्जर कम्पनी बाध्य हुने छैनन् ।’
अहिले करिब ६ लाख नेपाली कतारमा कार्यरत छन् । नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने प्रमुख राष्ट्र पनि हो, कतार । यसकारण कतारमा कार्यरत करिब ६ लाख नेपालीसँग औसतमा ५ लाखका दरले कतारी रियाल रहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । सन् २०२२ मा कतारमा हुन लागेको विश्व कपका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि पछिल्ला वर्षमा धेरै नेपाली त्यहाँ गएका छन् । यसकारण ससानो रकममा भए पनि पनि धेरै सर्वसाधारणसँग कतारी रियाल रहेको रेमिट्यान्स कम्पनीहरू बताउँछन् ।
हाल कतारमा चौथो संस्करणको मुद्रा सञ्चालनमा छ । त्यहाँको सरकार (केन्द्रीय बैंकले) पाँचौं संस्करणको मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याइसकेको छ । सोहीकारण १ जुलाई २०२१ देखि चौथो संस्करणका मुद्रा चलनचल्तीबाट हटाउन लागिएको हो । यस विषयमा कतारको केन्द्रीय बैंकसँग छलफल भइसकेकाले यही वैशाख २७ भित्र राष्ट्र बैंकसमक्ष आइपुग्ने रियाल साट्न समस्या नहुने बताइएको छ । तोकिएको समयभन्दा ढिलो आउने रियालको सटही गर्न नसकिने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।
पाँच वर्षअघि चलनचल्तीबाट हटेको भारु पाँच सय र हजार दरका नोट भने अझै साटिएको छैन । राष्ट्र बैंकले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि भारतीय पक्षले चासो नदिँदा अझै सटही हुन नसकेको हो । भारत सरकारले २४ कात्तिक २०७३ (९ नोभेम्बर २०१६) देखि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यस बेलादेखि नेपालमा पनि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको वित्तीय प्रणालीमा करिब ५ करोड भारु पाँच सय र हजार दरका नोट छन् । यसबाहेक सर्वसाधारणसँग भएको प्रतिन्धित भारुको यकिन तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन ।
प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०७:१३
वैशाख ८, २०७८ सन्जु पौडेल, दुर्गालाल केसी
लुम्बिनी/दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका चारवटै कोरोना विशेष अस्पताल भरिएपछि नयाँ संक्रमितले भर्ना पाउन छाडेका छन् । गत वर्षको तुलनामा यसपालि कोरोना संक्रमित ह्वात्तै बढ्न थालेपछि उपचारमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
रूपन्देहीको बुटवल, भैरहवा, दाङको बेलझुन्डी र बाँकेको नेपालगन्जमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा छन् । यीबाहेक नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, क्रिमसन अस्पताललगायतमा कोरोनाका बिरामीको उपचार भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कोरोना विशेष अस्पतालमा मात्र २ सय ४१ बेड छन् । यहाँका विभिन्न निजी अस्पतालले ३ सय ८१ बेड कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले तोकेका चार कोरोना अस्पताल र तीन निजी अस्पतालमा गरी १ सय ३१ आईसीयू बेड छन् । त्यस्तै, १ सय १५ वटा एचडीयू, ८२ भेन्टिलेटर र ४ सय ९७ जनरल बेड रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५९ संक्रमित आईसीयूमा उपचाररत छन् भने १० जना भेन्टिलेटर र जनरल बेडमा ५६ जना लक्षण भएका बिरामी रहेका छन् ।
बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा १६ आईसीयू बेड रहेकामा अहिले १२ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । सबै बेडमा बिरामी छन् । बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालका प्रवक्ता डा. विष्णु गौतमले संक्रमितको संख्या बढे पनि बेड नबढेको बताए । सरकारले गर्नूस् मात्र भन्ने तर कार्यान्वयनको पाटोमा मौन बसिदिँदा अस्पताललाई अप्ठ्यारो परेको उनको भनाइ छ । रूपन्देहीकै भैरहवास्थित भीम अस्पतालका पाँच आईसीयूमध्ये दुईवटा मात्र प्रयोग भइरहेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. नारायण पोखरेलले बताए । ‘अन्य बेडको मर्मत गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘एचडीयू सुविधासहितको बेड बनाउनका लागि बजेट विनियोजन भई काम भइरहेको छ ।’
बेलझुन्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा पाँच आईसीयू बेड र २० एचडीयू बेड सञ्चालनमा छन् । ती बेड भरिभराउ अवस्थामा छन् । अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितमध्ये दुई जना ६ देखि १२ वर्षभित्रका छन् । अस्पताल सञ्चालन भइरहेको भवनको माथिका दुई तलामा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल केन्द्रीय विद्यापीठ रहेको छ । विद्यापीठमा हरेक दिन विद्यार्थी पढ्न आउँछन् । अस्पतालमा बिरामीको चाप यही अवस्थामा बढ्दै गएमा समस्या पर्ने जानकारी प्रशासन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई गराएको अस्पतालका व्यवस्थापक द्रोण वलीले बताए । लकडाउनको समयमा विद्यापीठको भवनलाई कोरोना विशेष अस्पताल बनाइएको थियो । त्यतिबेला पठनपाठन बन्द भएकाले शैक्षिक भवनमा ५० शय्याको व्यवस्थापन गरी बिरामी राखिएको थियो । हाल पठनपाठन अन्यत्र सार्न कठिन भइरहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. सञ्जय पोखरेलले बताए ।
नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा मंगलबार दिउँसोसम्म ८२ संक्रमितको उपचार भइरहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाश थापाले बताए । ‘एक सय बेड क्षमता भएकाले अहिलेसम्म थेग्न सकिएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमितको उपचारमा खटिने जनशक्तिलाई नै संक्रमण देखिन थालेकाले अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ ।’ यही अवस्थामा जनशक्ति संक्रमित भइरहे अस्पताल बन्द हुने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०७:११